Tirakoobka Haweenka Kenya lagu dilay sanadka 2019-ka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Tirakoobka Haweenka Kenya lagu dilay sanadka 2019-ka.
Last updated Dec 29, 2019 382 0
Xogtan oo laga soo uruuriyay ilo kala duwan oo ay ka mid yihiin booliiska ayaa muujinaysa in bishii ugu darneyd ee dhimashada haweenka Kenya ay noqotoy Febraayo, goortaasoo la dilay 17 gabdhood oo Kiristan ah.
Mid ka mid ah meydadka haweenka waxaa laga helay Magaalada Mortuary 12-kii Febraayo waxaana ka muuqday dhibaatooyin badan.
Bishii labaad ee ugu halista badnayd Kenya sida warbixinta lagu sheegay waxay ahayd Abriil iyada oo la soo wariyey 12 dil.
Janaayo iyo Maarso ayaa iyagana waxaa la diiwaan galiyay dilka 9 haween ah.
Bilihii May, Sebtember iyo Nofembar oo ku jira kaalinta afaraad ayaa waxaa la diiwaan galiyay siddeed dil oo dumar ah.
Kooxaha sameeyay tirakoobkan ayaa sheegay in haweenka la dilay %100 la kufsaday.
Diiwaannada la uruuriyay 12-kii bilood ee la soo dhaafay, Nairobi waa meesha ugu halista badan dumarka. Saddex iyo toban ka mid ah 94 dilalka ayaa waxay ka dhaceen magaalada caasimada ah ee Kenya. Mid ka mid ah falalkii ugu dambeeyay ee rabshadaha ayaa ka dhacay aagga Kasarani ee Nairobi markii gabar 24 jir ah oo dhigta Jaamacadda Kisii lagu kufsaday oo lagu dilay gurigeeda.